Nkọwa Black Butterfly Echiche Ụgha, Ime Mmụọ & Ihe Atụ - Ọnọdụ Ime Mmụọ
idozi ọrịa mmetụ iphone 6
kedu ebe igodo ụlọ dị na ipad
oku wifi na iphone 6
apple watch batrị na -agwụ ngwa ngwa
Njirimara Black Butterfly
Ị hụla urukurubụba ojii? Ihe ọ pụtara abụghị egwu dịka i chere .
Ruo ogologo oge, ọha mmadụ ahụla ọnụnọ nke nru ububa dị ka ihe ọjọọ, mana ihe bụ n'ezie ya pụtara ?
Ọtụtụ kwenyere na ọ bụrụ na urukurubụba mbụ nke oge onye mmadụ na -ahụ bụ oji, na oke égbè eluigwe na -abịa. A na -ahụkarị urukurubụba ojii dị ka akara ọnwụ n'ọtụtụ obodo, ebe ndị ọzọ, ọ bụ akara nke mgbanwe dị mma .
Ọ bụrụ na ị hụtụla urukurubụba ojii, ị ga -ahụla emume dị iche iche nke ọtụtụ mmadụ na -eme iji wepụ ihe ọjọọ nke ahụhụ a na -efe efe na -ebute ya, mana ihe ha pụtara n'ezie na -atụ egwu?
Nke bụ eziokwu bụ na mba, n'eziokwu, urukurubụba ojii nwere ike ịnọchite anya ozi ime mmụọ dị iche iche nke nwere ike gbanwee ndụ gị nke ọma. Naanị ị ga -ekiri ma ị ga -enweta azịza ndị ị na -achọbu.
Kedu ihe ọ pụtara ịhụ urukurubụba ojii?
Nru ububa na -anọchi anya olile anya, mgbanwe na mmalite ọhụrụ.
Anyị nwere ike ghara eto nku, mana anyị na -agakwa ọtụtụ mgbanwe n'oge ndụ anyị niile dịka ha. Ọ bụ ya mere eji ekwu na ịhụ urukurubụba ga -ewetara gị ozi ime mmụọ dị oke mkpa gbasara olileanya.
Yabụ oge ọzọ ị hụrụ otu urukurubụba ojii na -elebara anya nke ọma, ọ nwere ike ịbụ ịnwa ịgwa gị okwu.
Ihe ime mmụọ nke urukurubụba ojii pụtara:
Ịrahụ ụra ga -esiri gị ike.
Ịhụ nru ububa ojii nwere ike ịpụta na ọ na -esiri gị ike ihi ụra ma ọ bụ na ị ga -enwe ụra abalị n'oge adịghị anya.
Ha nwere ike bụrụ akara ngosi nke nrụgide ma ọ bụ ụfọdụ nsogbu ego ị na -eme ugbu a.
Ị nwekwara ike na -eche ọtụtụ ihe banyere oge gara aga, na -eche ma ihe ị mere ọ dị mma ka ọ dị njọ, ma ị kwesịrị ikwu ya ma ọ bụ na ị gaghị ekwu ya. Agbanyeghị na ị nwere nkwado nke ezinụlọ gị na / ma ọ bụ ndị enyi gị, ọ bụ nsogbu ị na -eme n'onwe gị.
Ozi ọma ahụ bụ na dị ka urukurubụba, nsogbu ndị ahụ ga -apụ n'anya ozugbo ha rutere.
Ịhụ nru ububa ojii na -egosipụtakwa ihe ncheta na Chineke na -anụ ekpere gị ma nye gị ihe ị chọrọ.
Mmekọrịta gị ga -adị mma
Ị nọwo na -ekpe ekpere ka ọ zaa? Nru ububa ojii nwere ike ịpụta na ndụ gị iji duzie gị na ntụzịaka mmekọrịta gị, ma ha bụ enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ịhụnanya.
Ọgụ ndị ahụ niile gị na ndị kacha mkpa na ndụ gị nwere ike kwụsị n'oge adịghị anya, nke kachasị mma, n'ụzọ dị mma!
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọta onwe gị n'ọgụ a na -aga n'ihu nke amaghị ma ịgbaghara onye dị gị mkpa ma ọ bụ na ọ gaghị agbaghara, ịhụ urukurubụba ojii nwere ike bụrụ akara na ịkwesịrị ịkwụsị inwe iwe ahụ n'ebe onye ahụ nọ.
Cheta na ịhụ nru ububa ojii na -anọchite anya mmalite ọhụrụ. Chọpụta, gwọọ ma were ihe niile dị mma iji mezi mmekọrịta ndị nwere oke ibu na ndụ gị.
Ị na -agbalị ịnagide afọ ndụ
Ịka nká abụghị usoro dị mfe maka onye ọ bụla. Enwere obi abụọ, nsogbu, n'etiti ihe ndị ọzọ, na nke ahụ nwere ike ime ka anyị ghara inwe ezigbo oge n'oge mgbanwe a dị mkpa. Ịhụ nru ububa ojii nwere ike igosi na ị na -amụta ime agadi n'amara.
Ikekwe nsogbu ịka nká ị na -amalite ịhụ tupu oge eruo karịa ka ị tụrụ anya ya, dị ka ịhapụ ebe nchekwa gị ma ọ bụ ghara ịdọrọ uche nke onye na -abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị, mana ọ bụghị ihe ị na -enweghị ike ịnagide, ebe ịhụ ịhụ urukurubụba ojii pụtara na ị bụ ịmara otu esi eweta mgbanwe.
Akụkọ ifo anyị kwesịrị ịkwụsị ikwere
Dị ka mbipụta ahụ si kwuo, ọ bụ ụgha kpamkpam na urukurubụba ojii na -egbu egbu ma ọ bụ nwere ike ibute ndị mmadụ isi, mgbe anya batara n'ájá sitere na nku ya. Naanị ihe nwere ike ime bụ obere iwe.
Ọzọkwa, ọ tụgharịrị bụrụ ihe na -emetọ osisi na okooko osisi n'abalị, na -eme ka mmepụta mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi pụta ihe.
Enwere ọtụtụ ụjọ na -enweghị isi nke e kwuru na urukurubụba ojii, ọbụlagodi n'ihi nkwenkwe ụgha, ọnụ ọgụgụ ha belatara, nke pụtara mmetụta ọjọọ na okike. Ọ bụ ya mere site ugbu a gaa n'ihu mgbe ị hụrụ ụdị ihe a anaghị atụ ya ụjọ ma ọ bụ merụọ ya ahụ n'ihi ọdịdị ya, ebe ọ bụ na ọrụ ya dị mkpa dịka nke onye ọ bụla ọzọ n'ime ụmụ ahụhụ.
Aha aha urukurubụba:
Ọ bụ ihe ijuanya izute nru ububa ojii zuru oke. Ọ bụrụ na i lere anya nke ọma, ị ga -ahụ agba dị ka oroma, odo, ọbara ọbara, na ọbụna acha anụnụ anụnụ, na nku ya. Ụfọdụ n'ime ha bụ:
Polyxenes nke papilio
Yabụ mgbe ọzọ ị ga -ahụ otu n'ime ndị a, agbala ọsọ ma ọ bụ mee ha ihe ọjọọ. Naanị nwee mmasị n'ebe ha nọ ma chee maka ozi ha nwere ike na -ezi gị.